Ndị ọkà mmụta sayensị Tomsk ga-eji ụzọ ọhụrụ ahazi mkpụrụ osisi - akwụkwọ akụkọ "Potato System"
Ndị ọkà mmụta sayensị Tomsk ga-eji ụzọ ọhụrụ ahazi ihe ọkụkụ
в Sayensị, News, Akụkọ mpaghara
Ndị ọkà mmụta sayensị nke Biological Institute of Tomsk State University n'ime usoro nke atụmatụ atụmatụ "Engineering Biology" na-emepe ụzọ iji mee ka ọdịnaya nke ihe ndị na-arụ ọrụ ndụ na-arụ ọrụ na ọgwụ na-arụ ọrụ ugbo, na-akọ. pịa ọrụ nke TSU. Ihe mmemme gọọmenti etiti "Priority 2030" kwadoro nyocha ahụ.
"Anyị na-amụ usoro nhazi nke metabolites nke abụọ nke osisi nri ndị kacha ewu ewu n'etiti ndị Russia - kukumba na nduku, yana osisi ọgwụ - orgaadai ilu na lychnis calcedony," ka Ekaterina Boyko, onye nchọpụta na Ngalaba Physiology Plant na-ekwu. Biotechnology na Bioinformatics nke Biological Institute of TSU. - Metabolites nke abụọ, n'adịghị ka ndị mbụ, nwere uru na-arụ ọrụ ọ bụghị na ọkwa cell, kama n'ogo nke osisi dum. Ha na-arụ ọrụ "nkà na ụzụ": ha na-echebe osisi ahụ site na pests na pathogens, na-ekere òkè na mmepụta, ma hụ na mmekọrịta nke osisi na ibe ha na ihe ndị ọzọ dị na gburugburu ebe obibi.
Maka ụmụ mmadụ, metabolites osisi nke abụọ bụ isi iyi bara uru nke ogige bara uru nke na-ekwe nkwa ọ bụghị naanị maka nkà mmụta ọgwụ, kamakwa maka ụlọ ọrụ nri, ụlọ ọrụ na-esi ísì ụtọ na ịchọ mma, na ndị ọzọ.
Ọmụmụ nke ọkwa nke metabolites nke abụọ na ihe ọkụkụ a kụrụ n'ubi ga-emeziwanye ogo ngwaahịa nri na ọgwụ ọgwụ nke osisi. Ọzọkwa, ọmụmụ nke usoro ndị a nwere ike ikpughe ihe ọhụrụ na ndị nnọchianya a ma ama nke ogologo osisi ma gbasaa ebe a na-eji ha eme ihe.
The definition nke "na-anabata" synthesis Filiks na N'ezie nke ọhụrụ ọmụmụ ga-ekwe ka TSU biologists ozugbo "jikọọ" akara ụmụ irighiri (atụ, gas transmitters, calcium) n'ọdịnihu mee ngwangwa mmepụta nke abụọ metabolites. N'ọdịnihu, nke a bụ ụzọ ezubere iche maka mgbanwe nke genome.
"Ka ọ dị ugbu a, anyị na-achịkwa na-enweghị iwebata atụmatụ ọhụrụ," Irina Golovatskaya, onye njikwa ọrụ na-akọwa. - Na mmalite nke njem ahụ, anyị na-achọ isi ihe ntụgharị na metabolism nke flavonoids (ọtụtụ n'ime ha bụ pigmenti osisi) site n'enyemaka nke phytohormones. Anyị nwere mmasị ka ụzọ maka njikọ nke metabolites nke abụọ si dị iche ma ọ bụ yie na ụdị osisi dị iche iche. Dịka ọmụmaatụ, kedu otu flavonoids na-etolite na nzaghachi nke onye na-ahụ maka uto nke sitere na mpụga, nha ya na ọdịdị ya, ihe nzaghachi uto nke osisi ma ọ bụ omenala sel ga-eso. N'okwu a, a ga-eji ike ịmegharị ihe okike nke mkpụrụ ndụ omenala ma ọ bụ osisi na-enweghị ịgbanwe genome ka ọ dị ugbu a.
N'ikpeazụ, nsonaazụ nyocha nke ndị ọkà mmụta ihe banyere ndụ TSU ga-enye aka n'ịmepụta ahịrị gburugburu ebe obibi na nke na-arụpụta ihe nke ubi ugbo, yana osisi ọgwụ nwere nnukwu ọdịnaya nke ihe ndị na-arụ ọrụ ndụ.
isi: National Research Tomsk State University
Tags: nke abụọ metabolitespotetoTSU
Ihe ise kpatara ịwụnye ngwa mkpanaka maka akwụkwọ akụkọ Potato System
Thelọ ọrụ kacha sie ike na nduku na mpaghara Kurgan na-ezube iwere nnukwu ihe